ပြည်ပမှ သယ်လာသော အလောင်းအား လေဆိပ်တွင် ထုတ်ခွင့်မရလို့ မသာပါးစပ်ထဲကတောင်နှိုက်ယူတဲ့ အနေအထားမို့ ပြောပါတော့မည် လို့ဆိုလိုက်တဲ့ ကျော်သူ – ရှအေလငျး
ပြည်ပမှ သယ်လာသော အလောင်းအား လေဆိပ်တွင် ထုတ်ခွင့်မရလို့ မသာပါးစပ်ထဲကတောင်နှိုက်ယူတဲ့ အနေအထားမို့ ပြောပါတော့မည် လို့ဆိုလိုက်တဲ့ ကျော်သူ
မသာပါးစပ် ထဲကတောင်နှိုက်ယူတဲ့ အဆင့်ရောက်နေပါပြီလား လို့ပြောလိုက်တဲ့ ကျော်သူ။ ဒီနေ့ ပြည်ပမှ သယ်လာသော အလောင်းအား လေဆိပ်တွင် ထုတ်ခွင့်မရလို့ ကိုကျော်သူပေါက်ကွဲနေတာ ကို ပရိတ်သတ်အတွက် တင်ပြပါရစေ။
“””မသာပါးစပ်ထဲက နှိုက်စားသူများ။ မပြောမပြီး မတီးမမြည်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ပြောပါတော့မည် သမ္မတကြီးခင်ဗျား။ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် မိသားစုနှင့်ခွဲခွါ၍၀မ်းရေးအတွက် ပင်ပန်းဆင်းရဲခံကာ ရှာဖွေစားသောက်ပြီး ပြည်တွင်းရှိမိသားစုများထံသို့ ထောက်ပံ့ငွေပို့ပေးနေရရှာသောမြန် မာနိုင်ငံသားများ ပြည်ပနိုင်ငံတွင်ဆုံးပါးသွားသည့်အခါ ကျန်ရစ်ခဲ့သောမိသားစုများ၏ ဆန္ဒအရ မြန်မာပြည်တွင်းသို့သေဆုံးသွားရရှာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ရုပ်ခန္ဓာအား လေယာဉ်ဖြင့်သယ်ဆောင်ခဲ့ရာတွင်လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြားပြည်ပ နိုင်ငံမှဝန်ထမ်းများသည် လိုလေသေးမရှိကူညီပေးခဲ့၍ ထိုသေဆုံးသူ မြန်မာနိုင်ငံသား၏ ရုပ်ခန္ဓာမှာ မြန်မာပြည် ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့လျောလျူစွာ ရောက်ခဲ့သော်လည်း
သူ၏ရုပ်ခန္ဓာအား မြန်မာပြည်လေဆိပ်တွင် လွယ်ကူစွာထုတ်ခွင့်မရသည်မှာ အဘယ့်ကြောင့်နည်း ဟု ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတော့သည်။ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပါလျက် အမိမြန်မာနိုင်ငံသို့အသက်မပါသည့် ခန္ဓာအားပြန်လည်ဝင်ခွင့်ပြုရန် အတွက် ချို့တဲ့သည့် မိသားစုများအနေဖြင့် အလွန်ခက်ခဲလှပေတော့သည်။
ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပါတ်သက်၍ ကျွန်တော့ထံသို့ စာတစ်စောင်ဝင်လာသည်ကို ဖတ်ရှုစေချင်သည်။ (…..) နိုင်ငံ မှ မြန်မာနိူင်ငံသို့ နာရေးများပြန်ပို့ ရာတွင် မြန်မာနိူင်ငံရှိ (…..) လေကြောင်းလိုင်းကာဂိုဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သော ( – ) ဌာနမှ (……) ဆိုသူသည် နာရေးတစ်လောင်း (၇) သောင်းမှ (၈) သောင်းကျော် တရားဝင်မိသားစုများထံတောင်းခံပါသည်။
မိဘများမပေးပါက သေဆုံးသူ အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် (…..) နိူင်ငံလေဆိပ်သို့ နာရေးသယ်ဆောင်ခွင့် မပြုနိုင်ကြောင်း မသိနားမလည်သည့် အပူသည်ကာယကံရှင်မိသားစုများအားခြိမ်းခြောက်သည့်ပုံစံဖြင့်ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်နေပါသည်။
ပြည်တွင်း ပြည်ပ လူမူကူညီရေးအသင်းများက(အခမဲ့) ကူညီနေသော်လည်း ယင်းရန်ကုန်ရှိငွေကြေးအဓမ္မတောင်းခံနေသော ထိုသူအတွက်ပိုက်ဆံလာပေးခိုင်းသလိုဖြစ်နေပါသည်။ ထိုသူသည် ရန်ကုန်လေဆိပ်ရှိ (….) နိုင်ငံလေကြောင်းလိုင်းကာဂိုဌာနတွင်နေ့စဉ်တောင်းရမ်းနေပါသည်။ မည်ကဲ့သို့ အရေးယူလျင်ရနိူင်ပါမည်လဲဟု တင်ပြပါသည် ။
နာရေးကူညီမူ(ရန်ကုန်) မှ ကာယကံရှင်၏နေရပ်ဒေသသို့ ကူညီပို့ဆောင်ရမည့်နာရေးများဖြစ်သဖြင့်တင်ပြအပ်ပါသည်။ မှ/ ( …..နိုင်ငံ မှမြန်မာပရဟိတအသင်း)အော်… ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ လာဒ်ပေးလာဒ်ယူကိစ္စက မသာပါးစပ်ထဲကတောင်နိူက်ယူတဲ့အဆင့်ရောက်နေပါပြီလားဟုတွေးတောရင်းဖြင့်… “သေသောသူသည်သုဿန်သို့ သက်သက်သာသာသွားသင့်သည်။”
(ကျော်သူ) Myanmar Live
မသာပါးစပျ ထဲကတောငျနှိုကျယူတဲ့ အဆငျ့ရောကျနပေါပွီလား လို့ပွောလိုကျတဲ့ ကြျောသူ။ ဒီနေ့ ပွညျပမှ သယျလာသော အလောငျးအား လဆေိပျတှငျ ထုတျခှငျ့မရလို့ ကိုကြျောသူပေါကျကှဲနတော ကို ပရိတျသတျအတှကျ တငျပွပါရစေ။
“””မသာပါးစပျထဲက နှိုကျစားသူမြား။ မပွောမပွီး မတီးမမွညျပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ ပွောပါတော့မညျ သမ်မတကွီးခငျဗြား။ ပွညျပနိုငျငံမြားတှငျ မိသားစုနှငျ့ခှဲခှါ၍ဝမျးရေးအတှကျ ပငျပနျးဆငျးရဲခံကာ ရှာဖှစေားသောကျပွီး ပွညျတှငျးရှိမိသားစုမြားထံသို့ ထောကျပံ့ငှပေို့ပေးနရေရှာသောမွနျ မာနိုငျငံသားမြား ပွညျပနိုငျငံတှငျဆုံးပါးသှားသညျ့အခါ ကနျြရဈခဲ့သောမိသားစုမြား၏ ဆန်ဒအရ မွနျမာပွညျတှငျးသို့သဆေုံးသှားရရှာသညျ့ မွနျမာနိုငျငံသားမြား၏ ရုပျခန်ဓာအား လယောဉျဖွငျ့သယျဆောငျခဲ့ရာတှငျလူမြိုးခွား၊ ဘာသာခွားပွညျပ နိုငျငံမှဝနျထမျးမြားသညျ လိုလသေေးမရှိကူညီပေးခဲ့၍ ထိုသဆေုံးသူ မွနျမာနိုငျငံသား၏ ရုပျခန်ဓာမှာ မွနျမာပွညျ ရနျကုနျလဆေိပျသို့လြောလြူစှာ ရောကျခဲ့သျောလညျး
သူ၏ရုပျခန်ဓာအား မွနျမာပွညျလဆေိပျတှငျ လှယျကူစှာထုတျခှငျ့မရသညျမှာ အဘယျ့ကွောငျ့နညျး ဟု ကြှနျတျောစဉျးစားမိတော့သညျ။ မွနျမာလူမြိုးဖွဈပါလကျြ အမိမွနျမာနိုငျငံသို့အသကျမပါသညျ့ ခန်ဓာအားပွနျလညျဝငျခှငျ့ပွုရနျ အတှကျ ခြို့တဲ့သညျ့ မိသားစုမြားအနဖွေငျ့ အလှနျခကျခဲလှပတေော့သညျ။
ဤအကွောငျးအရာနှငျ့ပါတျသကျ၍ ကြှနျတော့ထံသို့ စာတဈစောငျဝငျလာသညျကို ဖတျရှုစခေငျြသညျ။ (…..) နိုငျငံ မှ မွနျမာနိူငျငံသို့နာရေးမြားပွနျပို့ရာတှငျ မွနျမာနိူငျငံရှိ (…..) လကွေောငျးလိုငျးကာဂိုဌာနတှငျ တာဝနျထမျးဆောငျသော ( – ) ဌာနမှ (……) ဆိုသူသညျ နာရေးတဈလောငျး (၇) သောငျးမှ (၈) သောငျးကြျော တရားဝငျမိသားစုမြားထံတောငျးခံပါသညျ။
မိဘမြားမပေးပါက သဆေုံးသူ အလုပျလုပျကိုငျသညျ့ (…..) နိူငျငံလဆေိပျသို့ နာရေးသယျဆောငျခှငျ့မပွုနိုငျကွောငျး မသိနားမလညျသညျ့ အပူသညျကာယကံရှငျမိသားစုမြားအားခွိမျးခွောကျသညျ့ပုံစံဖွငျ့ပွောဆိုမှုမြားပွုလုပျနပေါသညျ။
ပွညျတှငျး ပွညျပ လူမူကူညီရေးအသငျးမြားက(အခမဲ့) ကူညီနသေျောလညျး ယငျးရနျကုနျရှိငှကွေေးအဓမ်မတောငျးခံနသေော ထိုသူအတှကျပိုကျဆံလာပေးခိုငျးသလိုဖွဈနပေါသညျ။ ထိုသူသညျ ရနျကုနျလဆေိပျရှိ (….) နိုငျငံလကွေောငျးလိုငျးကာဂိုဌာနတှငျနစေ့ဉျတောငျးရမျးနပေါသညျ။ မညျကဲ့သို့အရေးယူလငျြရနိူငျပါမညျလဲဟု တငျပွပါသညျ ။
နာရေးကူညီမူ(ရနျကုနျ) မှ ကာယကံရှငျ၏နရေပျဒသေသို့ ကူညီပို့ဆောငျရမညျ့နာရေးမြားဖွဈသဖွငျ့တငျပွအပျပါသညျ။ မှ/ ( …..နိုငျငံ မှမွနျမာပရဟိတအသငျး)အျော… ကြှနျတျောတို့နိုငျငံ လာဒျပေးလာဒျယူကိစ်စက မသာပါးစပျထဲကတောငျနိူကျယူတဲ့အဆငျ့ရောကျနပေါပွီလားဟုတှေးတောရငျးဖွငျ့… “သသေောသူသညျသုဿနျသို့ သကျသကျသာသာသှားသငျ့သညျ။”
(ကြျောသူ) Myanmar Live
“အရှိုးရာတွေ ထပ်တလင်းကျန်းနေတဲ့ မိဘမဲ့ဂေဟာ “ကရုဏာအိမ်လေး”..ကလေးတွေ သနားပါတယ်..😢😢”
“ကျော်ကျော်နန္ဒအား.. အကယ်ဒမီတက်ရောက်ခွင့် …စာရင်းကနေ ပယ်ဖျက်”
ကင်းမြီး​ကောက်​ …ကင်း​ခြေများ ကိုက်​ခံရလျှင်​...
၈ မိုင်-၉ မိုင် ကြားက YBS ၃၇ ယာဉ်တိုက်မှု ၁ဦးသေ (ရုပ်သံ)